Mahazoma : Zara fa nisy mpifidy -
AccueilSongandinaMahazoma : Zara fa nisy mpifidy
Misedra olana ny fotoam-pifidianana tany Ambodimanga Mahazoma noho ny nafitsoky ny dahalo. Ny alin’ny talata lasa teo dia nisy fanafihana omby tany amin’io fokontany io. Lasan’ireo olon-dratsy avokoa ny omby tany an-toerana, ka lasa nanara-dia izany ireo vatan-dehilahy rehetra. Araka izany, zara raha nisy olom-pirenena firy ny birao fandatsaham-bato tany amin’ity faritra niharan’ny fanafihana nanomboka tamin’ny fotoana nisokafany.
Toraka izany ihany koa ny tany Maintirano, lasan’ny dahalo mpanao fanafihana tamin’izany avokoa ny fitaovana sy ny anton-taratasy hentin’ny olom-pirenena mifidy. Na dia izany aza, efa miezaka mamaha izany olana izany ny komity misahana ny fifidianana ao Maevatananana nony tsy fahafahan’ireo vatan-drehilahy maneho ny safidiny noho ny fanarahana omby lasan’ny dahalo. Amin’izao fotoana anoratanay izao mbola andrasana ny fiverenan’ireo olona hanao ny adidiny, hoy ihany ny nambaran’ny komity. Ny biraom-pifidianana ihany koa dia misokatra hatrany saingy vitsy ireo mpifidy tonga nanatanteraka ny adidiny noho io antony manokana io.